Labsiin baraarsaa mootummaa Itoophiyaa eenyu ilaallata? - BBC News Afaan Oromoo
Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa yaa'ii hatattamaa har'a taa'een namoota yakka gara garaatiin shakkaman baraarsuuf wixinee dhiyaate raggaasise.
Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa mana maree bakka bu'oota Obbo Pheexiros Waldasanbat gabaasa korichaa dhiyeessuun gaaffii miseensota mana marichaaraa dhiyaatanif deebii laataniiru.
Wixinee Koree Dhaabbii Seeraafi Haqaan dhiyaaterratti marii gagggeessun Labsii Lakkoofsa 1096/2010 taasisuun kan raggaasise.
Labsiin kun namootni gosoota yakkaa garaagaraan shakkamanif adeemsif qorannoo akka addaan cituufi dhiifamni akka godhamuuf kan dandeesisudha.
Kana malees namootni mootummaa irratti dhiibbaa yookin rakkoo geesisan, sababa siyaasaan kan biyyaa bahan fi namoota mootummaan ni barbaadamna jedhanii haala garaagara keessa jiranis akka baraaraman labsiin kun carraa kan uumuudha jedhameera.
Nama tokkof dhiifamni godhamuuf dhiibbaa yakki inni hojjete birmadummaa biyyattii irratti qabu, dhiifamni godhamu nagaa fi tasgabbii mirkaneessuuf filannoo gaarii yoo ta'e akkasumas fedhii namni dhiifamni godhamuuf gara jireenya naga qabeessatti deebi'uuf qabu ilaalcha keessa kan galchu dha.
Manni Marichaa Yaa'ii atatamaan taa'e kanarratti miseensota Koree Boordii Hoji-gaggeessitootaa Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa hir'ata guutuuf muudama kenneera.
Muudama kanaan Deetaan Ministiraa Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Obbo Kaasaahun Gofee walitti qabaa boordii ta'aniiru.
Aadde Jamiilaa Shimbiiruu, Aadde Abebech Sheekechaafi Diyaaqon Daani'eel Kibrat ammoo miseensota boordii dhaabbatichaa ta'uun muudamaniiru.
Erga dhiyeenya kana haaromsa karaa gara garaan akka dhufu taasisuu eegalee mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaan hidhaman hedduu hiikuufi namootaafi dhaabbilee biyya keessaafi alaatii shorokeessummaanirraa himannaa haquun isaa ni yaadatama.
Dhiibbaa labsinii yeroo muddamaa damee turiizimiirratti qabaatu